Qeybta 1: version ugu danbeysay ee windows media player 2015
Qeybta 2: daaqadaha 10 wuxuu tegsiiyaa daaqadaha ciyaaryahan hadli doonin saxaafada ee 2015?
Qeybta 3: Talooyinka la isticmaalayo xarunta Windows Media
Windows media player waa mid ka mid ah barnaamijyada kuwa hubiyaa in user helo shaqeynta la mid ah iyo sidoo kale warbaahinta guud ciyaaro waayo-aragnimo waxaa style iyo fasalka. Waa in la ogaadaa in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in barnaamijka la adeegsadaa habka ugu fiican oo sidaas daraaddeed shaqeynta guud waa in la isticmaalaa hab sameeyo sidii loo xeeladda ku qoray shirkadda. Maqaalkani waa mid si dhab ah ay ka buuxaan macluumaad ku saabsan mustaqbalka windows media player si fiican ee laga qaadi karaa arrin ku saabsan.
Ciyaaryahan warbaahinta ayaa 12 bilaabay waxaa loo arkaa inay version ugu dambeeya ee barnaamijka oo sidaas daraaddeed hadda waa dhalashada in Microsoft ma soo saari doonta ciyaaryahanada warbaahinta dheeraad ah oo ku saabsan la xiriirta edition cusub oo ka mid ah daaqadaha laga bilaabi lahaa July 2015. Waxaa sidoo kale in la xuso in taageerada ayaa sidoo kale la joojiyey oo sidaas daraaddeed user ay u baahan tahay in la hubiyo in ciyaaryahanka waxaa ka mid ah uninstalled isticmaalaya dhisay terminologies ama haddii user oo weli doonaya inuu u sii tahay in lagu guuleysto waa in ay si aad u hubiso arrimaha lahayn dhici arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in Eray guud ee media player sidoo kale waa in ay noqdaan haro iyo sida shirkadda version DVD ee laga bilaabi doonaa mustaqbalka si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira .
Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in haddii nidaamka waa la casriyeeyay si daaqadaha 10 markaas Eray guud ee xarunta warbaahinta oo ay la socdaan ciyaaryahan warbaahinta kaliya ma la naafo, laakiin barnaamijka marnaba doonaa mar kale ku rakiban sameeyo. Sidoo kale waa mid ka mid ah khasaaraha OS ugu danbeeyay ee ay bilowday Microsoft sida ugu comments ee qaar ka mid ah dadka isticmaala laakiin Eray guud ahaan waxaa loo qaadi doonaa heerka ku xiga sida uu sheegay in ay Microsoft shir ku dhiirigelinayaan in uu qabtay Sam Francisco. Oo sidaas waa xilligii ammaanta ciyaaryahan Windows Media ayaa ugu danbeyn soo dhamaaday, taas oo aan kaliya hubiyo in arrinta guud ee user la xalin, laakiin waxa uu sidoo kale xaqiijiyey in qaadashada guud ee media player ama qoraalkii in laga bilaabi lahaa sannadaha soo socda ayaa sidoo kale la safeeyey ilaa xad weyn si user waa inay awoodaan inay ku raaxaystaan ​​shaqeynayaan feature full of windows media player la tayada iyo fasalka.
Media Center in mar qaaday tirada xajin ee isticmaala dunida oo dhan ugu dambeyntii waa dhintay sidii loo xaqiijiyay Microsoft ay shir ku dhiirigelinayaan in uu ku qabtay January 2015. Windows 10 waa OS ugu fiican in la bilaabay by Microsoft ilaa hadda laakiin sidoo kale waa in la ogaadaa in ciyaaryahanka warbaahinta xarunta ku caashaqa oo ah waa arrin horay loo arkaa in ay tahay ugu xumaa ee jeer oo dhan sidaas darteed aysan u ogolaan user si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ee arrintan la xiriira waa in la hubiyo in daaqadaha 10 functionalities hubaal ka mid noqon doona ciyaaryahan sida OS ah waxaa loo arkaa inay dhamaystirnayn aan this laakiin mid sheey aan hubo in ay tani ma noqon doonto windows media player ka dhigi oo sidaas daraaddeed waxaa sidoo kale in la xuso in user wuxuu hubinayaa in in ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay ciyaaryahan warbaahinta kaliya ee lagu raaxaysan karaa haddii user helo qoraalkii ka weyn daaqadaha sida daaqadaha 7 iyo 8 oo dhan koob. Ma jiro hab kale si ay u hubiyaan in ciyaaryahan warbaahinta ayaa waxaa ku riyaaqay sidii loo joojin iyo user ma u adeegsan kartaa arrin ku saabsan marka ay timaado daaqadaha 10 sida Eray guud ahaan waa lagama samayn la socon daaqadaha 10 OS in waa Intaa waxaa dheer ugu danbeeyay ee ka Microsoft ee qoyska ka mid ah OS. User ayaa la eego waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah tahay sifooyinka sidoo kale waa in la riyaaqay marka ay timaado daaqadaha 10 laakiin waxa ay leedahay in la sameeyo hubiyo in dadka isticmaala daaqadaha 10 xaqiiqo ah u leeyihiin inay iska ilaawaan warbaahinta daaqadaha ciyaaryahanka 10 waa hubaal.
Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala kuwa doonaya in ay ku raaxaystaan ​​shaqeynayaan feature buuxa aan casriyeeyo nidaamka ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in Eray guud ee Center Media waxaa kaliya ma ahan faa'iideysan sida qaybtan laakiin sidoo kale ay u baahan yihiin si ay u hubiyaan in functionalities ayaa waxaa sidoo kale la fuliyo.
1. user ayaa isticmaali kartaa Hanuuniyaa bilowga ah in ay yihiin uploaded in internet-ka si loo hubiyo in muujinta ah ee TV live iyo kuwo liita waxaa ku riyaaqay habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xusay in dadka isticmaala ee waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah hage TV tahay Mudanayaasha ayaa sidoo kale la siiyey by Microsoft si user in ay tahay in la hubiyo in hage la isticmaaley si fiican oo ka mid ah sameeyo waa Media shaqeynta xarunta in ka yar yahay su'aashan.
2. desktop Hulu sidoo kale lagu daro karo windows media player iyo tani waa mid ka mid ah kuwa muuqaalada taas oo inta badan isticmaala waxaa ka mid halmaansan. Tilmaan-bixiyahan waxa si kastaba ha ahaatee aan la bixiyaan Microsoft, laakiin lama soo baadhi karo oo la helay si fudud online.
3. live duubo TV shaqeynta sidoo kale lagu raaxaysan karaa si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay aan ku riyaaqay kaliya laakiin user sidoo kale uu helo ugu wanaagsan ee reer arrin ku saabsan. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in lagu duubay TV sidoo kale la saxar karaa waana ka shaqeynayaan in aan la dhexgelin badan oo ka mid ah ciyaartoyda in ay bixiyaan shirkadaha kala duwan.
> Resource > WMP > 3 wax ku saabsan daaqadaha media player 2015